Amangcwaba eMveliso, lo ngamangcwaba emveliso ekhunjulwayo | Iindaba zeGajethi
Kule minyaka, iimveliso ziyavela kwaye ziyanyamalala - iinkonzo ezikwi-Intanethi. Abanye babo bashiya uphawu olukhulu kunabanye, kodwa bonke banomngxunya kwikhompyuter yakho okanye kwisikhangeli sewebhu. Nangona kunjalo, ukuzikhumbula zonke ngumsebenzi onzima kwaye ungcono kunokuba ube nendawo yamangcwaba apho unokufumana nganye nganye. Yile ndlela azalwe ngayo amangcwaba eMveliso.
Amangcwaba akwi-Intanethi aqokelela zonke izihloko zeenkonzo-okanye iinkqubo-ezithi ngenye imini zisuke ebuqaqawulini ziye kwelokulibala. Nangona kunjalo, kukho iimeko apho le mveliso ikhumbula ingenayo inkcazo kwaye amawaka abasebenzisi bayinkedama ngenxa yesigqibo sokuba babaleke ngokungathandabuzekiyo ngaphambi kokubambela ngokufanelekileyo. Zolile kuba Ingcwaba leMveliso likwabonelela ngolu lwazi.
Ngokukhawuleza nje ukuba ungena kwindawo yamangcwaba ebonakalayo Unokufumana amagama awaziwayo anje ngeGoogle Reader, i-Picasa, i-MailBox okanye inkonzo yomculo kuyo umchachazo Kwindawo. Ngokucofa kwinkonzo nganye oza kungena kuyo. Apho uyakufumana ulwazi malunga nokuzalwa kwayo- yasungulwa kwimarike-, xa bagqiba ekubeni baphazamise inkonzo yayo kwaye yayiyintoni unobangela wayo.
Ngoku, mhlawumbi umsebenzi onomtsalane kwezona zinto ziqwalaselwe- kwaye yeyona inokuthi ivelise owona mdla mkhulu kula mangcwaba akhethekileyo- ngu Isindululo sezinye iindlela kwezi nkonzo kwaye onokuzisebenzisa ngoku. Ukukunika umzekelo: iRSS feed aggregator Google Reader inezinto ezibambeleyo njengeFeedly, iAOL Reeder, iDIGG okanye iPeedwind. Kukho ezinye iindlela, kodwa i-portal iqokelela kuphela ezo sikubonisa zona. Ngoku, ngamangcwaba apho abasebenzisi banokufaka khona igalelo, ke uluhlu lunokwenziwa lube lukhulu.
Okokugqibela, ndikuxelele Ingcwaba leMveliso linenani elikhulu leenkonzo ezibhalisiweyo. Kwaye ukwenza kube lula kuwe ukufumana lowo ushiye uphawu kuwe nakwindlela osebenza ngayo, zonke uzicwangcise ngokwe-alfabhethi kwiwebhu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Ingcwaba leMveliso, lo ngamangcwaba emveliso ekhunjulwayo
UGoogle usicebisa ukuba sisebenzise ityuwa yokugcina amandla ahlaziyekayo